धनकुटामा बालिका माथिको यौनशोषण – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
धनकुटामा बालिका माथिको यौनशोषण
आरोपित तीनजना पक्राउ र एक जना फरार
२०७७, २ जेष्ठ शुक्रबार २१:३३
धनकुटा जेष्ठ २ । गत केहि महिनादेखि एक वालिकालाई चार जनाले ललाईफकाई यौनशोषण गरिरहेको घटना पर्दाफास भएको छ । जव ती १३ वर्षिया वालिका ४ महिनाको गर्भवती भईन ।
धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ कि दलित ती नावालिकालाई एक जना हैन, दुईजना हैन, चार चार जनाले समय समयमा यौनशाषण गर्दै आएको घटना सार्वजनिक भएको छ । ती नावालिकाको पेट बढ्दै गछि गर्भ होकि भनेर किटले परिक्षण गर्दा गर्भ देखाएका थिए । त्यसपछि उसलाई कसको गर्भ भनेर केरकार गर्दा उनले चार जनाको नाम लिएका थिए ।
गर्भ रहेपछि ती चार जनाको विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । ती चारजनामा माथिल्लो गोकुण्डेश्वर माविका शिक्षक मदन अधिकारी, धनकुटा वडा नं. ६ का गौरी अत्री, सिरान बजारका देवेन्द्र श्रेष्ठ र कचिडेका भक्तबहादुर मगर रहेको जनाएको छ । उनीहरुले ती वालिकालाई घर जंगलमा समय मिलाएर यौनहिंसा गर्ने गरेको खुलेको छ । उनीहरुले सय पाँच सय दिने र खाजा नास्ता खुवाउने गरेको पनि खुलेको छ ।
उजुरी दर्ता भएलगत्तै ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने शिक्षक मदन अधिकारी भने फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक ध्रुव श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रनाउ श्रेष्ठले प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेर आवश्यक कानूनी कारवाहीका लागि अदालत जाने जानकारी दिए ।
ती बालिकाको धनकुटा अस्पतालमा प्रहरीको निगरानीमा उपचार भइरहेको जनाएको छ । नेपालका कानूनअनुसार नावालिकालाई उसको सहमती यौनसम्पर्क गरेको भएपनि यौनहिंसामा मुद्धा चल्ने छ ।
पक्राउ परेका तीन अभियुक्तहरुमा अत्री आत्माराका व्यवसायी हुन् भने श्रेष्ठ भिमनारायण चोक सिरानबजारमा खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्तै मगर स्थानीयवासी हुन् ।
काठमाडौंमा राहत वितरण
पत्रकार महासंघबाट श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सहयोग